WHP (Web Hacking Professionals) - Khit Minnyo
WHP (Web Hacking Professionals)
Web Hacking သီးသန့် Course ဖြစ်ပြီး
Website နှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာများ၊
Vulnerability များ၊ Attack များကို
စာတွေ့၊ လက်တွေ့ လေ့လာနိုင်မည့် Course ဖြစ်ပါသည်။
Course Fee = 120,000Ks
WHP Course တွင် ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများ
01. Basic Web Apps && Services
05. Session Management
06. Data Validation
07. Cryptography (basic)
08. Client side and phishing
09. Web App PenTest processes
11. Web Vulnerabilities
12. Finding vulnerabilities in Web Apps
15. Cookie injection
16. Click jacking
18. CMS Pentesting
19. PenTesting NoSQL Database
21. File including (LFI && RFI)
22. Exploiting File Upload vulnerabilities
23. Studying Web Security Tools
24. Bonus lessons
#ခန့်မှန်းကြာချိန် = ၃ လ
#စတင်မည့်အချိန် = သင်တန်းအပ်ပြီးပြီးချင်း စ လေ့လာနိုင်သည်။
#သင်တန်းကြေး = 120,000 Ks only
#ClassType = Online Class
#Google Classroom ဖြင့် သင်မည်။ Assignments, Questions, … စသည်ဖြင့် စာတွေ့ လက်တွေ့ အားလုံးပါမည်။
၁။ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ ရှိရပါမည်
(အနိမ့်ဆုံး RAM 4GB ရှိရပါမယ်)
၂။ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ တတ်ထားရပါမည်
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Messenger m.me/AllInOneHackingTraining မှ ဖြစ်စေ
Viber +959976 41 3560 မှ ဖြစ်စေ
Phone 09 799 535 021 မှ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်